Ex က ကိုယ်ပုံတင်တိုင်း Like ပေးနေတာဘာကြောင့်လဲ -
Posted on January 11, 2019 January 11, 2019 Author Sugar Cane	Comment(0)
သူဘာကြောင့်များ Like တွေပေးနေလဲ စဉ်းစားရခက်နေလား
သူနဲ့ကိုယ် လမ်းခွဲခဲ့ကြပြီးပြီ။ အချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခုကို ဖြတ်သန်းလာပြီးနောက် ကိုယ်လည်း အတော်တည်ငြိမ်လာပြီ။ အသည်းကွဲ သီချင်းတွေ မဆိုတော့ဘူး။ အတူသွားခဲ့ဖူးတဲ့ နေရာတွေရောက်ရင် အရင်လို ဝမ်းမနည်းတော့ဘူး။
တစ်နေ့တော့ Facebook ကို ဖွင့်လိုက်တဲ့အခါ… ဝိုး ကိုယ့်ပုံတွေကို သူ Like ပေးထားပါလား။ မေ့နိုင်ပြီဆိုပေမဲ့ ဒီလိုဆိုတော့ မေးခွန်းတွေ ရင်ထဲမှာ ပေါ်လာပြီ။
Whyyy???? ဘာကြောင့်များပါလိမ့် ..
ဒီလိုမျိုးတွေ ကြုံးဖူးပါသလားယောင်းရေ။ ဒါမှမဟုတ် အခု အဲ့လိုဖြစ်နေလား ? ဒါဆို အက်ဒ်မင်က ယောင်းကို ကူညီပေးမယ်နော်။
ဘာကြောင့် အချစ်ဟောင်းက ကိုယ့်ပုံတွေကို Like ပေး နေရတာလဲဆိုတော့ အဖြေက နှစ်ခုဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ကိုယ့်အတွက် ခံစားချက် သူ့ရင်ထဲမှာ ရှိနေသေးလို့ ဖြစ်နိုင်သလို သူ့ရင်ထဲမှာ ကိုယ် လုံးဝ မရှိတော့လို့လည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ ….
သူက ကိုယ့်အတွက် ခံစားချက်ရှိနေသေးတဲ့အခါ
ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာ သူက ကိုယ့်ပုံတွေကို Like တွေပေးပြီး ယောင်းဆီက အာရုံစိုက်မှုလိုချင်နေတာပါ။ ဒါကြောင့် သူက ယောင်းပုံတွေကို မကြာခဏ Like တွေ အသည်းတွေ ပေးပါလိမ့်မယ်။
ဒီအခါ ပုံတွေကို ဆက်တိုက် အသည်းတွေ အများကြီးပေးထားလို့ Noti တွေ အများကြီး တက်လာတာမျိုး၊ ပုံအခုတင် အခု Like တက်လာတာမျိုးဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။ တစ်စတစ်စ အဆင့်တက်လာရင် ကွန်မန့်တွေ ဝင်မန့်တာလုပ်လာပါလိမ့်မယ်။ နောက်ဆို Messenger မှာပါ သူဆက်သွယ်လာပါလိမ့်မယ်။
ဒီလိုဆိုရင်တော့ ယောင်းမှာလည်း သူ့အတွက် ခံစားချက်ရှိသေးရင် အိုကေ ပေါ့။ မရှိတော့ဘူးဆိုရင်တော့ ပြတ်ပြတ်သားသားငြင်းလိုက်တာပဲ ကောင်းပါတယ်နော်။
Related Article >>> ရည်းစားဟောင်းနဲ့ ပြန်တွဲတော့မယ်ဆို ဒါလေးတွေတော့ အရင် ပြန်စဉ်းစားသင့်တယ်နော်..
ကိုယ့်အတွက် ခံစားချက်သူ့မှာ မရှိတော့တဲ့အခါ
အဲ့လိုဆိုတော့ ကိုယ့်ကို သူမုန်းနေတာလို့ မဆိုလိုပါဘူး။ ကိုယ့်ကို ချစ်သူတစ်ယောက်လို ခံစားရတာတွေ၊ ကိုယ့်အတွက် သူနာကျင်ရတာတွေ သူ့မှာ မရှိတော့တာမျိုးပါ။
ဒါပေမဲ့ တစ်ချိန်က ပတ်သက်ခဲ့ဖူးသူမို့ ယောင်းကို မိတ်ဆွေတစ်ယောက်လိုတော့ သူခံစားရပါလိမ့်မယ်။ (ဒါကြောင့်လည်း အကောင့်ထဲမှာ သူရှိနေတာပေါ့) ဒီတော့ ယောင်းရဲ့ ပုံတွေ Post တွေ တက်လာရင် ဒီလိုပဲ သူ Like ပေး လိုက်တာပါ။ ဘာရယ်ညာရယ်မဟုတ်ဘဲ တွေ့လို့ Like တယ်ပေါ့။ ဒါမျိုးဆိုရင်တော့ ပထမ တစ်ခုလို အူယားဖားယား Like ပေးတာမျိုးမဟုတ်ဘဲ Post ဆယ်ခုတင်မှာ ငါးခုလောက် Like တာမျိုးဖြစ်ဖြစ် တွေ့ရမှာပါပဲ။
ဒီလောက်ဆိုရင်တော့ ဘာကြောင့် ကိုယ့် Ex က ကိုယ့်ပုံတွေကို Like ပေးနေလဲ ဆိုတာ သိနိုင်ပြီထင်ပါတယ်နော်။ ချစ်သူတိုင်းဆုံဆည်းနိုင်ကြပါစေလို့ အက်ဒ်မင်က ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ယောင်းရေ
References : datingadvice, exboyfriendrecovery
သူဘာကွောငျ့မြား Like တှပေေးနလေဲ စဉျးစားရခကျနလေား
သူနဲ့ကိုယျ လမျးခှဲခဲ့ကွပွီးပွီ။ အခြိနျအတိုငျးအတာတဈခုကို ဖွတျသနျးလာပွီးနောကျ ကိုယျလညျး အတျောတညျငွိမျလာပွီ။ အသညျးကှဲ သီခငျြးတှေ မဆိုတော့ဘူး။ အတူသှားခဲ့ဖူးတဲ့ နရောတှရေောကျရငျ အရငျလို ဝမျးမနညျးတော့ဘူး။
တဈနတေ့ော့ Facebook ကို ဖှငျ့လိုကျတဲ့အခါ… ဝိုး ကိုယျ့ပုံတှကေို သူ Like ပေးထားပါလား။ မနေို့ငျပွီဆိုပမေဲ့ ဒီလိုဆိုတော့ မေးခှနျးတှေ ရငျထဲမှာ ပျေါလာပွီ။
Whyyy???? ဘာကွောငျ့မြားပါလိမျ့ ..
ဒီလိုမြိုးတှေ ကွုံးဖူးပါသလားယောငျးရေ။ ဒါမှမဟုတျ အခု အဲ့လိုဖွဈနလေား ? ဒါဆို အကျဒျမငျက ယောငျးကို ကူညီပေးမယျနျော။
ဘာကွောငျ့ အခဈြဟောငျးက ကိုယျ့ပုံတှကေို Like ပေး နရေတာလဲဆိုတော့ အဖွကေ နှဈခုဖွဈနိုငျပါတယျ။ ကိုယျ့အတှကျ ခံစားခကျြ သူ့ရငျထဲမှာ ရှိနသေေးလို့ ဖွဈနိုငျသလို သူ့ရငျထဲမှာ ကိုယျ လုံးဝ မရှိတော့လို့လညျး ဖွဈနိုငျပါတယျ။ ဘယျလိုမြိုးလဲဆိုတော့ ….
Related Article >>> Exက ကိုယျ့ဆီပွနျလာတဲ့အခါ အရငျဆုံး စဉျးစားသငျ့တဲ့ အခကျြ (၅)ခကျြ
သူက ကိုယျ့အတှကျ ခံစားခကျြရှိနသေေးတဲ့အခါ
ဒီလိုအခွအေနမြေိုးမှာ သူက ကိုယျ့ပုံတှကေို Like တှပေေးပွီး ယောငျးဆီက အာရုံစိုကျမှုလိုခငျြနတောပါ။ ဒါကွောငျ့ သူက ယောငျးပုံတှကေို မကွာခဏ Like တှေ အသညျးတှေ ပေးပါလိမျ့မယျ။
ဒီအခါ ပုံတှကေို ဆကျတိုကျ အသညျးတှေ အမြားကွီးပေးထားလို့ Noti တှေ အမြားကွီး တကျလာတာမြိုး၊ ပုံအခုတငျ အခု Like တကျလာတာမြိုးဖွဈလာပါလိမျ့မယျ။ တဈစတဈစ အဆငျ့တကျလာရငျ ကှနျမနျ့တှေ ဝငျမနျ့တာလုပျလာပါလိမျ့မယျ။ နောကျဆို Messenger မှာပါ သူဆကျသှယျလာပါလိမျ့မယျ။
ဒီလိုဆိုရငျတော့ ယောငျးမှာလညျး သူ့အတှကျ ခံစားခကျြရှိသေးရငျ အိုကေ ပေါ့။ မရှိတော့ဘူးဆိုရငျတော့ ပွတျပွတျသားသားငွငျးလိုကျတာပဲ ကောငျးပါတယျနျော။
Related Article >>> ရညျးစားဟောငျးနဲ့ ပွနျတှဲတော့မယျဆို ဒါလေးတှတေော့ အရငျ ပွနျစဉျးစားသငျ့တယျနျော..
ကိုယျ့အတှကျ ခံစားခကျြသူ့မှာ မရှိတော့တဲ့အခါ
အဲ့လိုဆိုတော့ ကိုယျ့ကို သူမုနျးနတောလို့ မဆိုလိုပါဘူး။ ကိုယျ့ကို ခဈြသူတဈယောကျလို ခံစားရတာတှေ၊ ကိုယျ့အတှကျ သူနာကငျြရတာတှေ သူ့မှာ မရှိတော့တာမြိုးပါ။
ဒါပမေဲ့ တဈခြိနျက ပတျသကျခဲ့ဖူးသူမို့ ယောငျးကို မိတျဆှတေဈယောကျလိုတော့ သူခံစားရပါလိမျ့မယျ။ (ဒါကွောငျ့လညျး အကောငျ့ထဲမှာ သူရှိနတောပေါ့) ဒီတော့ ယောငျးရဲ့ ပုံတှေ Post တှေ တကျလာရငျ ဒီလိုပဲ သူ Like ပေး လိုကျတာပါ။ ဘာရယျညာရယျမဟုတျဘဲ တှလေို့ Like တယျပေါ့။ ဒါမြိုးဆိုရငျတော့ ပထမ တဈခုလို အူယားဖားယား Like ပေးတာမြိုးမဟုတျဘဲ Post ဆယျခုတငျမှာ ငါးခုလောကျ Like တာမြိုးဖွဈဖွဈ တှရေ့မှာပါပဲ။
ဒီလောကျဆိုရငျတော့ ဘာကွောငျ့ ကိုယျ့ Ex က ကိုယျ့ပုံတှကေို Like ပေးနလေဲ ဆိုတာ သိနိုငျပွီထငျပါတယျနျော။ ခဈြသူတိုငျးဆုံဆညျးနိုငျကွပါစလေို့ အကျဒျမငျက ဆုတောငျးပေးလိုကျပါတယျယောငျးရေ
Tagged exs, love, Relationship, Social Media
တစ်နေ့တည်းအတူတူ ဇီဝိန်ချုပ်ငြိမ်းဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြတဲ့ ဇနီးမောင်နှံ နှစ်ဦး
Posted on May 16, 2018 July 25, 2018 Author Khine
သေအတူ ရှင်မကွာ ဆိုတာမျိုးဟာ…..
Posted on February 22, 2019 February 22, 2019 Author Sugar Cane
ထက်မြက်တာလေးကို ချစ်မိပါတယ်ဆိုသူတွေကို Mention ခေါ်လိုက်တော့နော်
Posted on December 3, 2018 December 3, 2018 Author Sugar Cane
အရာရာတိုင်းမှာ သင်ခန်းစာယူစရာအများကြီးမို့ အသည်းကွဲခြင်းကလည်းဒီသင်ခန်းစာတွေပေးနိုင်ပါတယ်